Suuqa Shaqada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
M Gotland oo taageersan dalabyada is casilaad ee Kinberg Batra
Laanta xisbiga Moderaterna ku leeyahay Gotland ayaa sidoo kale taageersan dalabya ah in ay is casisho Anna Kindber Batra hoggaamiyaha xisbiga M.
Xubnaha ugu sareeya Moderaterka Stockholm oo aan kalsooni ku qabin Kindberg Batra
Dadka dalka ku cusub iyo qorshahooda shaqo helid
Shaqo doonka dalka ku cusub ee laga diiwaan-geliyey xaafiiska shaqada ayaa kor u kacday sannadkan, sida ay muujisay tirokoob todobaadkan ka soo baxay xaafiska shaqada Arbetsförmedlingen.
Soogalootiga cusub ee aqoontoodu hooseyso iyo suuqa shaqada
Tiro ka yar boqolkii afar soogalootiga dalka ku cusub ee waxbarashadoodu ay hooseyso ayaa u gudba waxbarashada dadka waaweyn kadib marka la siiyo deganaashaha.
Ururada shaqaalaha oo ogolaadey mushaaro iyo lacago deeq ah in la isugu daro soogalootiga cusub
Labada urur shaqaale ee ugu weyn dalkaan Sweden ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyey soo jeedin la xiriirta in dadka shaqa la’aanta ah mushaara hoose la siiyo markaas ka dibna dawladdu ku kabto mushaarka inta ka dhiman.
Qaab cusub oo loogu shaqaaleynayo dadka dalka ku cusub
500 milyan oo shaqooyin loogu abuuro dadka dalka ku cusub
Adeega dheeradka ah.
Degmooyinka dalka aad bay u yar tahay tirada dadka dalka ku cusub ee ay sahqaaleeyan inkasta oo ay dowladdu ku siiso dhaaqale taageero ah oo loogu talogalay in lagu baxiyo musharkooda.
Qaab cusub oo la doonayo in loogu sahlayo dadka dalka cusub ee suuqa shaqada ku adkaaday ayaa hadda waxa ka xaajoonaya ururada shaqobaxiyaasha iyo iskaashatada.
Dowladda: nidaamka karensdag isbaddel ayaa lagu sameeyn doono
Dowladda ayaa dooneysa sidii ay wax uga bedeli lahayd maalinta koobad ee qofku jirrada ku qoran yahay ee uusan mushaarka laheyn, waxa loogu yeero karensdag.
Regeringen vill ersätta karensdag med karensavdrag
Siyaasiin doonaya sharuudo adag in lagu xiro shaqo doonka dalka ku cusub
Tirada shaqo la’aanta ku sugan ayaa sii kordheysa.
Shaqo doon: xaafiiska shaqada caawinaad kamo helno
Dadka shaqo la'aanta waqti dheer ku sugnaa.
Qaar ka mid ah shaqo doonayaal ku sugnaa xaafiiska shaqada ee Xaafadda Kista waxey Radio Sweden u sheegeen in aysan caawinaada ay u baahan yahiin ka helin xaafiiska shaqada, gaar ahaana ay dhib ku tahay la kulanka gacan yarahooda xaafiiska shaqada.
Shaqa la'aanta oo kor u kacday muddo dhowr sano ah dabadeed
Heshiis: shaqaalaha warshadaha
Garabyada shaqaalaha warshadaha iyo mulkiileyaasha ayaa heshiis guud ka gaarey kordhinta mushaarooyinka, iyadoona maanta 12:00 ey ku soo ban-dhigi shir jaraa’id.
Haweenka oo duruufaha ay ku shaqeeyaan ka xun tahay tan ragga
Duruufaha dumarka dalkaani badanaa ku shaqeeyaan ayaa ka xun tan uu raggu ku shaqeeyo, sidaasna waxaa lagu muujiyey warbixin ay hey’adda deegaanka shaqadu ”Arbetsmiljöverket” maanta u gudbisey dawladda.
Ajaaniibta sharci darrada waddanka ku jooga oo la fileyo iney kordhaan
Tirada qof ee sharci darro waddanka ku jooga ee diidmada ka helay heeyada socdaalka ayaa kordhi doona sannadyada soo socda. Sidaas daraadeed ayaa booliska hawl looga dhigay sidii ay uga howlgeli lahaayeen.
Shaqo la´aanta oo aan ku xidhneeyn halkaad degantahay
Shalay arbacadii ayaa cilmi baadhis sheegaysa in shaqo la´aantu ku xidhneeyn halkaad degantihid lagu shaaciyay kullan lagu qabtay Fores, urur cilmiyeed madax banaan.
"Shaqo la´aantu waa cadowga ugu weeyn ee Soomaaliya ka jira"
Todobaadkii hore ayuu ururka Fursad Found oo ujeedadiisu tahay in lacag loo ururiyo soomaalida shaqo la´aantu hayso ee Soomaaliya jooga yimid Iswiidhan si dadkaas loo caawiyo.